Linux Kernel 4.17 mahatratra ny fiafaran'ny fiainana, ny mpampiasa dia asaina manavao ny Linux 4.18 | Avy amin'ny Linux
Ny andiany Linux Kernel 4.17 dia nahatratra ny faran'ny fiainany tamin'ny fiandohan'ny herinandro lasa teo niaraka tamin'ny famoahana ny kinova fikolokoloana nomerao 19 (Linux 4.17.19) ary tsy hahazo fanavaozana hafa.
Navoakan'ny Linus Torvalds malaza tamin'ny 3 Jona 2018, ny andian-dahatsoratra Linux Kernel 4.17 dia manolotra fanampiana ara-pitaovana tsara kokoa noho ny fampidirana ny fanohanana ny maritrano Intel an'ny Cannon Lake, ary koa ny fanohanana ireo mpikirakira Nvidia Tegra Xavier.
Ho fanampin'izay, nanampy ny fanohanana ireo karatra sary an-tsary Radeon Vega 12 ho avy ary nanala ireo maritrano micro isan-karazany toa ny Blackfin, CRIS, FR-V, M32R, Metag, MN10300, SCORE, ary TILE.
Linux Kernel 4.17 nanohana ny Asehoy ny kaody amin'ny mpamily AMDGPU maimaim-poana amin'ny audio / video HDMI, Nanampy ny HDCP sy ny fanatsarana ny fitantanana herinaratra.
Linux Kernel 4.17 dia mahatratra ny faran'ny tsingeriny
Toy ny zava-drehetra, Linux Kernel 4.17 dia nahatratra ny faran'ny tsingerenany tamin'ny fanavaozana farany indrindra, Linux 4.17.19, navoaka ny 24 Aogositra. Midika izany fa tsy hisy fanavaozana hafa intsony, koa asaina manavao haingana ny Linux Kernel 4.18 araka izay haingana indrindra.
Linux Kernel 4.18 dia navoakan'i Linus tamin'ny voalohandohan'ity volana ity, tamin'ny 12 Aogositra manokana, ity famoahana ity dia manolotra amboary ny fahalemen'ny Specter Variant 1 sy 2 amin'ny ARM 32-bit architecture ary amboary ny fahalemen'ny Specter Variant 4 ho an'ny ARM64 (AArch64) sy ny maritrano ARMv8.
Vaovao ihany koa ao amin'ny Linux Kernel 4.18 ny fanatsarana fanatsarana ny USB-C sy USB 3.2, fanohanana ofisialy ho an'ny mpikirakira Snapdragon 845 sy mpiorina runtime ho an'ny programa eBPF amin'ny maritrano 32-bit, miampy fanampiana tsara kokoa ho an'ny karazana rakitra F2FS.
Na dia atolotra anao aza ny manavao, tadidio fa tsy maintsy ataonao amin'ny alàlan'ny tahiry ofisialin'ny fizaranao izany, raha manana kinova fanampiana lava ianao dia tsy ilaina ny mametraka an'ity kinova ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Linux Kernel 4.17 mahatratra ny faran'ny fiainana, ny mpampiasa dia asaina manavao ny Linux 4.18